Boky Voalohan'i Samoela 8,4-7.10-22a.
Nivory ny loholon'Israely rehetra nankany amin'i Samoela, tany Ramà,
nanao taminy hoe: Hianao ity efa antitra ary ny zanakao tsy manara-dia anao, koa mpanjaka toy ny an'ny firenena rehetra no atsangano aminay hitsara anay.
Tsy sitrak'i Samoela izany teny izany noho izy ireo nanao hoe: Omeo mpanjaka izahay hitsara anay. Dia nivavaka tamin'ny Tompo Samoela; ary hoy Iaveh tamin'i Samoela:
Henoy ny feon'ny vahoaka araka izay rehetra holazainy aminao, satria tsy mba hianao no ariany fa izaho no ariany, dia ny tsy hanjakako aminy intsony;
Dia nambaran'i Samoela tamin'ny vahoaka nangataka mpanjaka taminy ny tenin'ny Tompo rehetra,
ka hoy izy: Izao no fahefana ampiasain'ny mpanjaka, izay hanjaka aminareo: Ny zanakalahinareo halainy ary hampitaingenany ny kalesiny sy hataony mpitaingin-tsoavaliny, ary hihazakazaka eo alohan'ny kalesiny izy ireo.
Hataony mpifehy arivo, mpifehy dimampolo izy; hampiasainy ny taniny, hampijinjainy ny variny, hampanaoviny ny fiadiany, mbamin'ny forongon-kalesiny.
Ny zanakavavinareo halainy ho mpamboatra zava-manitra, ho mpahandro, ho mpanao mofo.
Ny tanimbarinareo, ny tanim-boalobokareo, ny fototr'olivanareo tsara indrindra dia halainy ka homeny ny mpanompony.
Ny ampahafolon'ny vokatra aman-tanim-boalobokareo halainy ka homeny ny tandapa amam-panompony.
Ny mpanomponareo, na lahy na vavy, mbamin'ny ombinareo aman'ampondra tsara indrindra halainy hampanaovina ny asany.
Ny ampahafolon'ny biby fiompinareo halainy, ary ny tenanareo aza ho andevony.
Hitaraina hianareo amin'izany andro izany, noho ny amin'ny mpanjaka nofidinareo, nefa tsy hihaino anareo Iaveh.
Tsy nety nihaino ny feon'i Samoela akory ny vahoaka, fa hoy izy: Tsia, fa aoka ihany izahay mba hanam-panjaka!
Dia mba ho toy ny firenena koa izahay: ny mpanjakanay no hitsara anay, hitari-dàlana anay, ary hitari-tafika anay.
Nony ren'i Samoela ny teny rehetra nataon'ny vahoaka dia nolazainy indray ho ren'ny Tompo;
ka hoy Iaveh tamin'i Samoela: Henoy ny feony ka manangàna mpanjaka ho azy. Dia hoy Samoela tamin'ny lehilahy amin'Israely: Samia mody any an-tanànanareo avy hianareo.
Sambatra ny vahoaka mahalala ny hobin-kafaliana, sy mandeha amin'ny fahazavan'ny tavanao, ry Iaveh!
Mifaly mandrakariva amin'ny anaranao izy; ary misandratra amin'ny fahamarinanao.
Fa hianao no voninahiny amam-pahefany, ary ny fanambinanao manondrotra ny herinay.
Satria avy amin'ny Tompo ny ampinganay; ary avy amin'ilay Masin'Israely ny mpanjakanay.
Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Marka 2,1-12.
Andro vitsivitsy taorian'izany, dia niditra tao Kafarnaoma indray izy.
Nony re fa hoe tao an-trano izy, dia nivory betsaka dia betsaka ny olona, ka tsy nisy hitoerana intsony na dia hatrany anoloan'ny varavarana aza; dia nitory teny taminy izy.
Tamin'izay dia nisy nanatona azy nitondra lehilahy malemy anankiray, izay nolanjain'olona efa-dahy.
Tsy afa-nanatona azy anefa izy ireo noho ny habetsahan'ny vahoaka, ka dia ny tafon-trano nitoerany no nanesorany; nony voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana nandrian'ilay malemy.
Ary Jesoa nony nahita ny finoan'ireo, dia nanao tamin'ilay malemy hoe: Anaka, voavela ny helokao.
Fa nisy mpanora-dalàna sasany nipetraka teo ka nanao anakampo hoe:
Ahoana no itenenan'ilay ity toy izany? Miteny ratsy an'Andriamanitra lahy izy. Iza no mahavela fahotana afa-tsy Andriamanitra irery ihany?
Fantatr'i Jesoa tao amin'ny fanahiny niaraka tamin'izay fa nieritreritra izany tao anatiny izy ireo ka hoy izy taminy: Nahoana hianareo no mihevitra toy izany ao am-ponareo?
Inona no moramora kokoa, ny manao amin'ity malemy hoe: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: Mitsangàna, betao ny fandrianao, ary mandehàna?
Ary mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manam-pahefana etý an-tany hanafaka ny fahotana, dia izao no lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay malemy:
Mitsangàna, betao ny fandrianao, ary modia any an-tranonao.
Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nambeta ny fandriany, ary lasa nody teo imason'ny olona rehetra; any ka talanjona izy rehetra sady nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe: Tsy mbola nahita tahaka izany izahay.